Yenikent Yazıdere Yolu Da Beton Yol Oluyor | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး26 EskisehirYenikent Yazidere လမ်းသည်ကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်လာသည်
15 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 26 Eskisehir, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ကတ္တရာသတင်းများ, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, တူရကီ 0
Eskişehirတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, တူရကီရဲ့အမျိုးမျိုးသောမြို့ကြီးများအတွက်စမ်းသပ်ပြီးနှင့်ကွန်ကရစ်အလုပ်ခေါ်ဆောင်သွားမလြော့အောင်မြင်သောလမ်းကြောင်းကိုဆက်လက်။ မကြာသေးမီကပြီးစီးခဲ့သည် Cevizli-Bardakçı-Hankaraağaç-Gökçekuyuရပ်ကွက်များသည် 30 ကီလိုမီတာကွန်ကရစ်လမ်းကိုဖုံးလွှမ်းသွားပြီ။ ယခု Seyitgazi ခရိုင်နှင့် Ankara အဝေးပြေး Yenikent-Yazidere ရပ်ကွက်အကြားရှိကွန်ကရစ်လမ်းများအကြားလမ်းဖောက်လုပ်မှုစတင်ခဲ့သည်။
Metropolitan မြူနီစီပယ်စီးပွားရေးနှင့်နှစ် ဦး စလုံးသည်ကတ္တရာလမ်းထက်ပိုရှည်သောကွန်ကရစ်လမ်းပေါ်တွင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။ အင်ကာရာလမ်းပြီးစီးပြီးနောက်အွန်နူ၊ Seyitgazi နှင့်Tepebaşıခရိုင်များသည်အဓိကသွေးလွှတ်ကြောလမ်းများအကြားKalkanlı-Aksaklı-Yenikent-Büyükdere-Yazidere နှင့် Seyitgazi ခရိုင်စင်တာကို ဆက်သွယ်၍ အဓိကသွေးလွှတ်ကြောလမ်းကြောင်းနှင့်စတင်ခဲ့သည်။ လမ်းအဖွဲ့များ၏စံချိန်စံညွှန်းများမြှင့်တင်ရန်စတင်ခြင်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်းလုပ်ငန်းများစတင်ပြီးနောက်တွင်6မီတာမှ 8 မီတာအထိလမ်းအကျယ်။
Seyitgazi မြို့တော်ဝန်Uğur Tepe ကလေ့လာမှုများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပြောကြားခဲ့သည်။ uz Seyitgaz ရှိကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားများအားကတိပြုခဲ့သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့တော်မြူနီစီပယ်နှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။ 30 ကီလိုမီတာ Cevizliယခု Yazdere-Yenikent-Aksakli-Buyukdere မြို့တော်စည်ပင်သာယာအကြားယခုကွန်ကရစ်လမ်းပြီးနောက်-Bardakçı-Han လမ်းစတင်အလုပ်လုပ်သည်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာမှုကိုအလွန်အရေးကြီးတဲ့မြို့တော်ဝန်YılmazBüyükerşenနှင့်အတွင်းရေးမှူးချုပ်AyşeÜnlüceတို့နှင့်အဖွဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးတာဝန်ရှိသူများကလေ့လာရေးareaရိယာအားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်ဟုဖော်ပြထားသောကြောင့်5လမ်းသည်ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကြီးမားသောကြောင့်အနီးအနားရှိကြီးမားသောလမ်းနှင့်အဓိကအင်ကာရာခရိုင်စင်တာသို့အဓိကလမ်းကိုဆက်သွယ်ပေးသည်။
Düzceလွမ်းဆွတ်ဓါတ်ရထားကားဂိုဒေါင်က Wall များတွင်ရိုက်နှိပ်စာသားမှတုန့်ပြန် 10 / 06 / 2018 Düzceရှိအမည်မသိလူများသို့မဟုတ်လူများက tram ကားဂိုဒေါင်နံရံတွင်ရေးထားသည့်ရုပ်ဆိုးသောအရေးအသားများသည်တုံ့ပြန်မှုကိုဆွဲဆောင်သည်။ Çokဟုပြောသောနိုင်ငံသားများသည်နံရံမှုတ်ဆေးသုတ်ဆေးများဖြင့်နံရံများစွန်းထနေသောကြောင့် ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းပါသည်
OSB-Sincan Yenikent ညနေ့အကြားတွင်အဆိုပါ Path ကိုချဲ့လေ့လာရေး Continues 15 / 11 / 2018 Ankara Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်၏လေးဘက်နှစ်ဘက်ကိုလမ်းအသစ်များနှင့်တပ်ဆင်ပြီး၊ လက်ရှိလမ်းများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်နှင့်လိုအပ်နေသည့်ဒေသများရှိလမ်းများတိုးချဲ့ရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။ Ankara မြို့တော်ဝန် Assoc ။ ဒေါက်တာ Mustafa တူနာ၏လက်ရာများ ...
Yenikent - အခြေခံ. လမ်းဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါခေါ်ယူဖျက်သိမ်းခဲ့သည် 10 / 04 / 2014 KGM Yenikent - Temelli yolu inşaatı ihalesi iptal edildi.Karayolları (KGM) Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı, “Yenikent - Temelli Yolu (Enerji İletim Hatları Deplase İşleri Dahil) Km: 0+000 -…
Yenikent - စပ်, ရေနုတ်မြောင်းအဆောက်အဦများ, တံတား, plentmix subbase ၏အခြေခံပြီးလမ်း, plentmix အခြေစိုက်စခန်းပူရောနှောကတ္တရာခင်းအလုပ်ပြုမိပါလိမ့်မည်အိုးအိမ်မဲ့ခဲ့ကြ 02 / 04 / 2014 Yenikent - Temelli လမ်း၊ မြေမှုန့်၊ အနုပညာအဆောက်အအုံများ၊ တံတားများ၊ ရေအောက်သဘာ ၀၀ န်းကျင်အခြေစိုက်စခန်း၊ lentmix အခြေစိုက်စခန်း၊ bituminous ပူပြင်းသည့်အရောအနှောဖုံးခြင်းနှင့်နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်းများအခြားအဝေးပြေးလမ်းမကြီးစီမံကိန်းနှင့်အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန။
Yenikent Ayaşလမ်းအလုပ်များသည်အရှိန်အဟုန်မြှင့်နေသည် 12 / 10 / 2019 Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in dört bir tarafındaki yeni yol açım, yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sürücülerin sürüş ve yol güvenliğini önceleyen yeni projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, Yenikent…
OSB-Sincan Yenikent ညနေ့အကြားတွင်အဆိုပါ Path ကိုချဲ့လေ့လာရေး Continues
Yenikent - အခြေခံ. လမ်းဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါခေါ်ယူဖျက်သိမ်းခဲ့သည်
Yenikent - စပ်, ရေနုတ်မြောင်းအဆောက်အဦများ, တံတား, plentmix subbase ၏အခြေခံပြီးလမ်း, plentmix အခြေစိုက်စခန်းပူရောနှောကတ္တရာခင်းအလုပ်ပြုမိပါလိမ့်မည်အိုးအိမ်မဲ့ခဲ့ကြ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အလုပ်ကနေကွန်ကရစ်ပာသို့မဟုတ်ပင်အိပ်ပျော်ရထား၏လောင်းကွန်ကရစ် stacking စက်တင်လှည်း refresh မှအလျင်မြန်ဆုံးလမ်း
မြေထဲပင်လယ် Coastal အဝေးပြေးသွားအဝေးပြေးလမ်းမကြီးခှဲဝေ
သမိုင်းဝင် Silk Road "မီးရထား" သွား ...